Ny pejy fandokoana ala dia misintona, manonta ary miloko maimaim-poana
Ny natiora madio no traikefa nahafinaritra indrindra teo amin'ny fiainan'izy ireo ho an'ny ankizy. Tsy misy na inona na inona kilalao lehibe ataon'ny solosaina, afaka manome ny ankizy ny zavatra niainany rehefa milalao any ivelany.
Ary miaraka amin'ny sary fandokoana anay manodidina ny ala, azonao atao ny mampahafantatra ny zanakao ny natiora amin'ny fomba filalaovana. Fa zava-dehibe foana fa ny famolavolana ireo pejy fandokoana dia ho an'ny ankizy. Rehefa tsindrio ny rohy dia misokatra miaraka amin'ny maodely fandokoana ny pejy.
Ala anaty masoandro
Ala anaty orana
Ala an-tendrombohitra misy renirano
Teny lakile fanampiny: ala, ala